China Ibhokisi yokuPakisha yePhepha eliLingeneyo leWayini ebomvu enombala we-Blue EVA yokufaka abenzi kunye nabathengisi | URaymin
Ibhokisi yokuPakisha yoMgangatho wePhepha eliBomvu yewayini ebomvu enombala weBlue EVA
Icandelo lesicelo: iwayini
Material: 157gsm Iphepha Camera + 1500gsm greyboard
Phawu: Luhlala ixesha elide, Umgangatho ophezulu
Ubukhulu: 30 x 15 x 6cm
Umbala: Shicilela umbala weSpot
Umphezulu Gqiba: Spot UV, Matte okanye Lamination ecwebezelayo, ngefoyile ye Ukunyathela, Embossing, Debossing, Gold okanye iSilver bexhentsa eshushu
Inkonzo ye-OEM: Ewe
Ixesha Sample: iintsuku 2-5
Intlawulo yeSampula: I-50 yeedola, inokubuyiselwa emva koku-odolwa ngobuninzi
Ukuhanjiswa kwesampulu: UPS, Fedex, DHL
Ixesha lokuhanjiswa kwe-odolo: iintsuku ezili-15-18, kuxhomekeke kubungakanani
Imiqathango Intlawulo: T / T, L / C (ukuze ixabiso elikhulu), Western Union, PayPal
Kubalulekile ukuba ukhethe isitayile sebhokisi ebonakala ngathi iyasebenza kwaye iyasebenza. Kukho iindlela ezahlukeneyo zebhokisi ezinikezelwa kwiRaymin Display.
Ukuvalwa kweMagnetic: Iibhokisi zokuvalwa kwemagnethi zenziwe kwisiqwenga esinye. Ezi bhokisi zenziwe kusetyenziswa ibhodi engwevu ekumgangatho ophezulu. Ezi bhokisi zihlala zenziwe ngetyhubhu kunye noxande kwaye zinokubamba inani lezinto.
Isimbozo sokuphakamisa: Le bhokisi yenziwe nge-chipboard. Iibhokisi ezinesiciko sokunyusa zenziwe ngamaqhekeza amabini ahlukeneyo atyibilika ngaphezulu komnye. Nangona isitayile sokususa isimbozo siqhelekile kodwa yintoni eyenza ukuba yahluke kukuba inokubamba inani lezinto kwaye inokwenziwa ngemilo eyahlukeneyo kunye nobukhulu.
Isimbo sebhuku: Ibhokisi yesimbo sencwadi yenziwa ngemilo yencwadi. Olu hlobo lugcina into ikhuselekile ekuphumeni. Uhlobo lwebhokisi yencwadi lusetyenziswa kakhulu njengebhokisi yokubonisa njengoko ibonisa imveliso kwisitayile se-chic.
Ibhokisi engenakuguqulwa: Iibhokisi eziqinileyo eziqinileyo zenziwe kwibhodi engwevu. Oku kuhlala kunokuvalwa kwemagnethi okanye iribhoni. Isitayile, imilo, iindleko ezingabizi mali, kunye nokugcina amandla emisebenzi yile nto ayenzayo ukuba afaneleke kwizipho.
I-Flip Lid Box: Iibhokisi ezinesiciko seflip zixhaphake kakhulu kodwa imitya, iibhaksi kunye neemagnethi eziqhotyoshelwe kule bhokisi yoxande yiyo enika inkangeleko yesitayile.
Isilayidi sebhokisi yesilayidi: Olu hlobo lwenziwe kwi-chipboard. Iibhokisi zesitayile esilayidi zifana needrowa. Zigqibelele kwiimveliso ezibuthathaka kwaye ezinokwaphuka ngokulula. Isitayile sesilayidi sibonelela ngemveliso ngexabiso elifanelekileyo lomthamo kunye nokhuseleko olomeleleyo kulo naluphi na uhlobo lomonakalo.
Ibhokisi leNyawo lamagxa: Iibhokisi zegxalaba eziqinileyo ziyathandwa ngenxa yokusebenza kwazo okuphezulu. Ibhokisi yenziwe ngamaqhekeza amabini enye yile bhokisi enye sisiciko. Isiciko senziwe ngendlela enzulu kunebhokisi uqobo. Le bhokisi ibonelela ngokhuseleko oluphezulu kwimveliso.
Ibhokisi emiselweyo ejikelezileyo: Iibhokisi ezimile okombala zinika imveliso yakho ubugcisa obongezelelweyo. Ezi bhokisi ziziqwenga ezibini enye yibhokisi emise okweqanda kodwa enye sisiciko.
Uqweqwe olwahlukileyo: Ibhokisi engaphezulu yenqwanqwa iyafana nesimbo sokucima ibhokisi, nangona kunjalo, eyona njongo iphambili kule bhokisi ibonisa imveliso yakho kwintengiso. Iibhokisi zokugubungela ezikhethiweyo zinefestile ebonakalayo kwiziciko zazo ezenza imveliso ibonakale kubathengi. Unokukhetha ibhokisi elungele eyona mveliso yakho kuluhlu lwethu okanye uyile ukumila ngokwakho kwiqela lethu leengcali. Ngoncedo lwabayili bemizobo yethu abanetalente kunye nobuchule kunye netekhnoloji yethu ephambili sinokwenza imveliso ekumgangatho ophezulu kwiibhokisi ezomeleleyo kuzo zonke iimilo, uyilo kunye nesitayile. Umboniso weRaymin ubonelela nge-10-28pt yobukhulu beebhokisi.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weLid kunye nesitayile esisekwe kwibhokisi ephathekayo
Okulandelayo: Ibhokisi yesipho esitshixwayo seRibhoni yesinxibo seenwele ezihonjiswe ngelaphu lesilika
Isibonelelo sokusonga iZiko lokulahla imigqomo yokubonisa ipati ...
Iribhoni ibhokisi yesipho yokuvalwa kwesimbo esineenwele ze-dre ...